D-tagatose Cas 87-81-0 Soo-saareyaal, Soo-saareyaal ka socda Bolise
[CAS MAYA. ] 87-81-0
[Qaaciddada Molecular] C6H12O6
[Miisaanka Molecolar] 180.16
[ Meesha dhalaalaysa ] 134.5 ° C
[Muuqaalka] White Powder
1.Waxa loo isticmaalaa macaanka, wax-soo-saarka jelly, cabitaannada, cabitaannada caanaha, maraqa lohodka, suugo soy ah iyo agabka xamaasada kale.
2. Macmacaannada sharoobada daawada, dhumucyada, loo isticmaalo soo saarista nacnac heer sare ah iyo nacnac adag.
3. Loo isticmaalo alaab caafimaad qabta.
[Ku saabsan D-tagatose]
D-tagatose waa macaaneeye shaqaynaysa karbohayhaydrayt yar, buuxinta macaan, joojisa sonkorta dhiiga oo sareysa . Si kastaba ha ahaatee, si kala duwan ayaa loo dheefshiido, waxay saameyn yar ku leedahay gulukooska dhiigga waxayna siisaa saameyn prebiotic ah. Waxay wanaajin kartaa flora mindhicirka, iyo suuska ilkaha ka-hortagga, waxay tirtirtaa urta xun.
Sida macaaneeye shaqaynaysa, D-tagatose waxay leedahay rajada codsiga ballaadhan ee warshadaha cuntada, inta badan loo isticmaalo cabitaannada caafimaadka qaba, waxyaabaha caanaha laga sameeyo, macmacaanka, badarka iyo wixii la mid ah.
D-tagatose waxay si gaar ah ugu habboon tahay kobciye dhadhan ama macaaneeye karbohaydrayt yar.
Hadaad rabto inaad waxbadan ka ogaato D-tagatose macluumaad, ku soo dhawow inaad nala soo xiriirto!